Daawo Sawirada: Yaxya Jammeh oo isaga baxay Gambia iyo Adama Barrow oo Madaxtooyada kusii jeeda - iftineducation.com
Daawo Sawirada: Yaxya Jammeh oo isaga baxay Gambia iyo Adama Barrow oo Madaxtooyada kusii jeeda
iftineducation.com – Madaxweynihii dalka Gambia Yaxya Jammeh ayaa isaga baxay dalka Gambia kadib markii uu aqbalay in uu si nabad galyo ah xilka uga dego taladana ku wareejiyo Madaxweynaha la doortay ee Adama Barrow.
Masuuliyiin katirsan Ururka ECOWAS oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Madaxweyne Yaxye Jammeh uu isaga baxay dalka Gambia uu ka talinayay mudo 22 sano ah , waxa uuna u dhaqaaqay dalka Equatorial Guinea .
Madaxweyne Yaxye ayaa aqbalay in xilka si nabad galyo uga dego kadib markii Wadamada Galbeedka Qaarada Afrika isku raaceen in awood milatari u adeegsadaan hadii uu ka biyo diido in xilka ka dego.
Dabaal degyo waa weyn ayaa ka bilowday dalka Gambia kadib markii shacabka ka war heleyn in Madaxweynihii laga guuleestay dalka uu isaga baxay, waxa ayna shacabka ku faraxsan yihiin in talada si Nabad galyo ah kula wareego Madaxweynaha Cusub.
Dhinaca kale Madaxweynaha cusub ee la doortay ee dalka Galbeedka Africa ku yaala ee Gambia Adama Barrow, ayaa sheegay inuu dalkiisa dib ugu noqonayo si uu awoodda ula wareego ka dib markii madaxweynihii laga adkaaday uu Madaxtooyada baneeyay.
Madaxweyne Adama Barrow ayaa talada dalka Gambia la wareegi doono kadib 22-sano oo dalkaasi ka talinayay Madaxweyner Yaxye Jammah oo dhawaan looga guuleestay doorashadii dalkaasi ka dhacday.
Daawo Muuqaal :Madaxweyne Donald Trump oo laga cel celinayo Shacabkiisa & Qasaare weyn oo dhacay